Etu esi akpọ oku vidiyo na WhatsApp Web, nzọụkwụ site na nzọụkwụ - Mobile Forum | Nzukọ Ekwentị
Autlọ ọrụ akpaaka
Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
Etu esi akpọ oku vidiyo na WhatsApp Web, nzọụkwụ site na nkwụsị
Miguel Hernandez | | Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet, WhatsApp
na oku vidiyo aghọwo ezigbo ewu ewu, ma kwere nghọta na ịnwe ọrụ a oge ụfọdụ gara aga WhatsApp, Ndị ọrụ na-ahọrọ iji akụkụ a nke ngwa ngwa ozi kachasị ewu ewu na ahịa, ọ bụ ya mere, maara nke ọma na njirimara onye ọrụ, anyị họọrọ WhatsApp iji mee oku vidiyo nke onwe anyị ma ọ bụ ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ họọrọ ịmalite ụdị "weebụ" nke ngwa ya nke na-enye anyị ohere iji ọtụtụ atụmatụ ya ozugbo na kọmputa anyị, oku vidiyo bụ otu n'ime ha. Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi kpọọ oku vidiyo na WhatsApp Web ka ị nwee ike nweta ọtụtụ ihe na ya.
1 Differentzọ dị iche iche iji jiri WhatsApp Web
1.1 WhatsApp Web si nchọgharị
1.2 WhatsApp Web site na ngwa
2 WhatsApp Web nsogbu
2.1 Jiri WhatsApp Web na kọmputa abụọ n'otu oge
2.2 Jiri WhatsApp Web na-enweghị ohere na ekwentị
3 Etu esi akpọ oku vidiyo na WhatsApp Web
4 Ndị ọzọ na WhatsApp iji kpọọ oku vidiyo
4.4 Facebook ozi
Differentzọ dị iche iche iji jiri WhatsApp Web
Ihe mbụ anyị ga - egosi gị bụ ụzọ dị iche iche anyị ga - esi jiri WhatsApp Web, nke ahụ bụ na agbanyeghị ihe ọtụtụ mmadụ nwere ike iche, anyị nwere ihe karịrị otu. Ka anyị leba anya na nhọrọ dị iche iche na-ebilite.
WhatsApp Web si nchọgharị
Nke a bụ ọrụ a maara nke ọma, nke iji WhatsApp Web si na ihe nchọgharị, nke a dị mfe, iji WhatsApp Web site na ihe nchọgharị ọ bụla anyị kwesịrị Tinye adreesị ndị a ma chọọ: "web.whatsapp.com".
N'ụzọ dị otú a A ga-ebugharị anyị gaa na ngalaba Weebụ WhatsApp ọ ga-egosi anyị koodu QR na ihuenyo ahụ. Ugbu a, anyị ga-aga na WhatsApp ngwa iji nwee ike i scanomi QR ma jikọọ na WhatsApp Web.
Anyị na-abanye WhatsApp, pịa "Isetịpụ" anyị na-ahọrọ nhọrọ «WhatsApp Web / Desktọpụ». Igwefoto ga-emeghe ka i toomi koodu QR ma ọ ga-ejikọ na-akpaghị aka.
Ihe gbasara ya:
Etu esi emegharị WhatsApp na kaadị SD n'ụzọ dị mfe
WhatsApp Web site na ngwa
WhatsApp nwere ngwa dakọtara na Windows na macOS Iji nwee ike iji WhatsApp Web na ngwa desktọọpụ, nke a na-eme ka ọ dị mfe iji ma nwekwuo nkasi obi, ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ anyị na-emechi ihe nchọgharị ahụ na ndudue.
Nwere ike ibudata WhatsApp Web ngwa na macOS na Windows na njikọ ndị a:
Budata WhatsApp Web maka Windows: Jikọọ
Budata WhatsApp Web maka macOS: Jikọọ
Na njikọ nke Windows ị ga-enwe ike ibudata ya maka ngwa 32-bit na 64-bit, dabere na mkpa nke ngwaọrụ gị. Ugbu a iji jikọọ ya dị mfe dịka ịgbaso ntuziaka ndị ahụ dịka ọ dị na mbụ.
Mgbe anyị rụnyere anyị mepee ngwa ahụ na ọ ga-egosi anyị koodu QR dị ka ọ dị na mbụ na ụdị ihe nchọgharị ahụ, Anyị ga-agaghachi na nhọrọ iji nyochaa QR code iji WhatsApp Web na ngwa ahụ n'onwe ya ma ọ ga-ejikọ na-akpaghị aka.
Ọzọkwa ugbu a ọ ga-egosi anyị directlyma Ọkwa ozugbo en kọmputa ahụ Nke a bụ uru, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na gburugburu ebe ndị ọkachamara.
WhatsApp Web nsogbu
Ugbu a, anyị ga-agwa gị okwu banyere nsogbu ndị kachasị nke WhatsApp Web, nke mere na ị ga-echebara ha echiche mgbe ị na-eji ya ma na-echetara gị njedebe ya.
Jiri WhatsApp Web na kọmputa abụọ n'otu oge
Anyị ga-ewepụ kpamkpam ohere iji ya WhatsApp Web na ngwaọrụ abụọ n'otu oge. Anyị ga-enwe ike iji ya na WhatsApp Web n'otu oge ahụ anyị zipụrụ ozi site na smartphone, naanị.
Nke a bụ n'ihi na WhatsApp abụghị a n'elu ikpo okwu «na ígwé ojii», ya mere Mgbe sistemụ ahụ chọpụtara na anyị na - eji njikọ Weebụ WhatsApp ọzọ, ọ na - emechi nnọkọ kacha ochie na - akpaghị aka ma ziga anyị ozi anya.
Y’oburu n’acho iji otutu ihe na otutu usoro, i gha acho uzo ozo dika Facebook Messenger ma obu Telegram.
Kedu ihe na otu esi emepụta ngwa abụọ na gam akporo
Jiri WhatsApp Web na-enweghị ohere na ekwentị
Ọzọkwa anyị na-eme nkebi nke a. N'ihe banyere WhatsApp Web, ozi sitere na ozi anyị anaghị echekwa na sava ọ bụla, na nke a bụ a mara ezigbo njọ.
N'ezie, ekwentị anyị na-arụ ọrụ dị ka ihe nkesa, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe na-eme ka anyị ghara inwe ike gbanyụọ ekwentị ma ọ bụ kwụpụ ya na data. Nke a na-eme ka iji WhatsApp Web ezigbo batrị.
Yabụ, anyị na - ewepu ohere ọ bụla iji WhatsApp Web jiri ekwentị gbanyụọ ma ọ bụ na - enweghị njikọ data mkpanaka.
Etu esi akpọ oku vidiyo na WhatsApp Web
Oge eruola itinye ihe ị na-achọ, ohere nke kpọọ oku vidiyo site na WhatsApp, na ọ bụ nnọọ ihe mgbagwoju anya.
Otu esi eji mkpanaka gị dị ka kamera weebụ na mmemme ndị a
Maka ebumnuche ndị a kpọtụrụ aha na mbụ dị ka "WhatsApp Web nsogbu" anyị nwere ọtụtụ adịghị ike, nke mbụ bụ na iji kpọọ oku vidiyo na WhatsApp Web anyị ga-eji nyiwe ọzọ.
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ emeghe WhatsApp Web ma mekọrịta ngwaọrụ anyị dịka anyị kuziri gị na mbido.
Ozugbo oge malitere, anyị na-agbaso usoro ndị a:
Anyị na-pịa onye ọrụ ma ọ bụ otu ndị anyị chọrọ ịkpọ oku vidiyo.
Ozugbo n'ime mkparịta ụka ahụ, pịa akara ngosi "clip" nke na-egosi na aka nri aka nri.
Anyị na-ahọrọ nhọrọ ikpeazụ nke igwefoto vidiyo na-egosi na akara njikọ.
Anyị ga-enweta ọkwa "Gaa Ozi iji mepụta ime ụlọ."
Ọrụ a ga-enye anyị ohere ike a video ụlọ nke na- 50 ndị mmadụ site na ozi n'elu ikpo okwu nke Faceobook nwere. Naanị ịpị njikọ ahụ, onye ọ bụla nwere WhatsApp nwere ike ịbanye n'ime ụlọ ahụ.
Ma nke a bụ usoro nke WhatsApp guzobere ka anyị wee nwee ike ịkpọ oku vidiyo site na WhatsApp Web mfe
Ndị ọzọ na WhatsApp iji kpọọ oku vidiyo
Oku vidiyo nke na-ewu ewu dị n'ọtụtụ ngwa, anyị ga-ekwu maka ụfọdụ:
Nhọrọ ọdịnala, ngwa nke ihe fọrọ nke nta ka onye ọ bụla mara n'ihi na ọ bụ onye ọsụ ụzọ na nke a. Ọ na-enye ohere ruru mmadụ iri na vidiyo na ihe ruru 10 na ọdịyo. I nwere ike ibudata ya HERE.
Nke a bụ nhọrọ Google, ya na ezigbo nsonazụ. Ọ na-enyekwa ohere ịkpọ oku vidiyo nke ihe ruru mmadụ iri nwere ọtụtụ arụmọrụ na sistemụ multiplatform. Nwere ike ịnweta ozugbo si HERE.
Ihe kachasị ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya, ọ na-enye ohere ruo 100 ọrụ kpamkpam n'out oge, ọ na-nwere nnọọ fun skins na functionalities. Nwere ike ibudata ngwa HERE.
Nkwado ikpeazụ anyị (ọ bụghị maka nke ahụ ka njọ) bụ ọzọ nke teknụzụ ukwu ọzọ, anyị na-ekwu maka Facebook. Nhọrọ ndị kachasị ewu ewu n'ọtụtụ mba, gbakwunyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ị maara ga-enwe Facebook, kedụ ihe ọzọ ị nwere ike ịrịọ? I nwere ike ibudata ya HERE.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Etu esi akpọ oku vidiyo na WhatsApp Web, nzọụkwụ site na nkwụsị
Otu esi achọta faịlụ na Windows 10
The kacha mma PS2 emulators maka PC na gam akporo
Nweta akụkọ kachasị ọhụrụ na teknụzụ.
Nwepụta ihe na ntanetị
Black Friday dị ebe a!
Hụ nhọrọ anyị na mbelata kacha mma na teknụzụ
★ Hụ onyinye ★